1 KORINTIANA 4.14-21	F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
1 KORINTIANA 4.14-21	F. 6
Am-pitiavana (14-16). Nahoana no ilazan’i Paoly fa izy no ray ara-panahin’ny Korintiana ? Satria vokatry ny fitoriany sy ny fampianarany ny Filazantsara tao Korinto (Asa 18) dia maro ireo nino. Noho ny fidiran’ireo fampianarana samihafa dia nifikitra tamin’ireo “raiamandreny vaovao” indray izy ireo ka nanadino sy nanamavo an’i Paoly ilay nitaona azy ireo tao amin’i Jesoa!
Manao ahoana no fijerintsika sy fanehoantsika ny fankasitrahantsika ireo izay nanambara ny Filazantsara tamintsika?
Tsy nahaketraka an’i Paoly izany fa mbola nitaona azy ireo am-pitiavana izy hiverina amin’ny voatoatin’ny Filazantsara mba hanahaka azy tahaka ny anahafany an’i Kristy.
Arahin’asa (17). Zava-dehibe ho an’i Paoly ny fiambenana ny fanahin’ny olona notoriany ny Filazantsara. Tsy nitoetra amin’ny fanentanana fotsiny ihany anefa izy fa naniraka an’I Timoty hampahatsiahy ireo fitsipiky ny fiainana kristiana. Ny mpiandraikitra dia mila mahatsiaro mandrakariva ny hasarobidin’ny fanahin’ny olona eo anatrehan’Andriamanitra.
Hentitra (18-21). Ny zanaka tiana no faizana (Ohabolana 3.11-12). Mandray ny fahefany i Paoly manoloana ireo mpirehareha. Mampandre ny amin’ny fiaviana any Korinto raha sitrapon’Andriamanitra izy hananatra ireo amin’ny fomba hentitra kokoa raha toa tsy mandray ny fananarana nataony. Moa ve tsy toetran’i Kristy no asehony amin’izany? Feno fitiavana fa hentitra amin’ny zavatra rehetra ataony araka ny fahefana ananany! Fa izay tian’i Jehovah no faizany. Ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny.
« Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin’ny
Tompo ary mananatra anareo, ary mba hohajainareo indrindra amin’ny fitiavana izy noho ny asany. » 1 Tesaloniana 5.12-13.